Hiran State - News: Magaalada Toronto oo uu si rasmi ah uga furmay shirkii lagu soo dhaweynayey musharaxa madaxweynaha Somaliya Ali Abdulle Guure
Magaalada Toronto oo uu si rasmi ah uga furmay shirkii lagu soo dhaweynayey musharaxa madaxweynaha Somaliya Ali Abdulle Guure
Toronto:Waxaa hada si rasmi ah u furmay shirweyne lagu soo dhaweynayo musharaxa madaxweynimada Somaliya Mudane Ali Abdulle Guure. shirka oo bilaawday 9,00PM xiliga Toronto waxaa lagu furay ayadaha qur'aanka kedibna waxaa daadihinayey dhinaca xiriirinta Luul Ali Hasan.
Waxaa intaasi kedib lagu soo dhaweyey fananada weyn ee Somaliyeed Nagruuma oo halkaasi hees ka qaaday kuma diidine waanu ku dooraneynaa ayaa ereyadii ay halkaasi ka jeedisay ka mid ahaa.Shirka oo siweyn looga soo qeyb galay waxaa wajigiisa farxad laga dheeghan karay musharaxa madaweynimada Somaliya Al Fanaan Ali Abdulle Guure.
Intasi kedib waxaa qudbado kala duwan ka jeediyey halkaasi waxgarad iyo aqoonyahano kuwaasi oo iskugu jiray dhibaatada dalka ku habsatay iyo sida looga bixi karo iyadoo ay siweyn u dhiragaliyeen dadweynahii halkaasi iskugu yimid musharaxa.
Magaalada Toronto oo ay ku nool yahiin faaniin badan ayaa madasha shirka laga dareemayey heesahooda iyo gabayadooda maadama uu musharaxu yahay fanaan taasi oo muujineysay in uu musharaxiinta kale ee Soamliyeed kaka dhaw yahay isaga.
Musharaxa ayaa caawa siweyn looga faalooday qaabkii uu fanka ku soo galay iyo waliba waxyaabo badan oo qosol xambarsanaa oo dadka aad uga qosliyey kedib markii ay ku dheeraatay taariikhda musharaxa Fanaanada weyn ee Somaliyeed Daleys.
Dhinaca kale maadaama musharaxu ka soo jeedo magaalada Bulo Burte waxaa iyadana xusid mudan in caawa ay shirka sifiican ugu soo qeyb galen reer Hiiraan haba u badnaadeen reer Bulo Burte oo aad mooday ineyba shirka iskugu habar wacdeen.
Fanaaniinta caawa wacdaraha ka dhigay madashii shirka waxaa ka mid ahaa Nagruuma, Luul Ali Hasan Luula, Daleys, Fartuun Birimo iyo waliba fanaanka dada yar ee Kooshin Yare oo isagu ka soo jeeda amaba ay isku meel ka wada yimaadeen musharaxa madaxweynimada Somaliya Al Fanaan Mudane Ali Abdulle Guure.
Intaasi kedib waxaa codbaahiyaha gabay baraanbur ah ka soo jeedisay Qamareey Diiriye Hasan oo halkaasi ka sheegtay murti dadkii dhageystay ay fadhiga ka kaceen oo ay wadaniyad ka muuqatay.
Mudo kedib waxaa lagu soo dhaweyey madasha shirka musharaxa madaxweynimada Somaliya Mudane Ali Abdulle Guure oo qudbad dhinacyo badan taabaneysa halkaasi ka jeediyey isagoo ku nuux nuuxsaday inuu wax badan ka qaban doono baahida wadankana gaarsiin doono horumar. sidoo kale musharaxa ayaa sheegay inuu isagu Ilaahey Indhaha tiray laaknse Alaahu subxaanahu watacaalaa uu qalbiga u qaboojiyey uuna wadanka niyad daacad ah ku hogaamin doono.
Mar uu siweyn u qiireysnaa musharaxa ayaa yiri waxaad la socotaan in wadanka Indonesia xili ay dhibaato ku jireen uu ilaah u soo diray hogaamiye Indha la sideydoo kale ninkaasi oo lagu magacaabi jiray Abdiraxmaan Waaxiid isagoo dhibaatadii shacabka iyo wadanka heysay ka saaray.
Walaalayaal Somaliya uma baahna fulay waxey u baahan tahay in loo helo geesi anigoo kale ah amaba iga sii ad adag, waxaana wadanka ka dhigayaa Dubai-da Africa maxaa yeelay wadankeena ayaa ka cimilo wanaagsan hadii maskax caafimaad qabto loo helo ayuu yiri musharaxu. sidoo kale musharaxa oo ay qudbadiisu ay taabaneysay meelo badan ayaa hadalkiisa ku soo qatimay duco uu ilaah uga baryayo shacabka Somaliyeed ee ku dhiban dalka iyo dibada isagoo kuwa dibadana kula dardaarmay iney la garab galaan sidii uu hamigiisa u miro dhali lahaa waxuuna yiri adinga i hor kaca ina daba kaca laakinse waxii wadanka dejintiisa ah ilaah ayaan la kaashanayaa oo anigaaba u bareeray inaan dejiyo ayuuna hadalkii ku soo qatimay.
Mar ay dadweynahii aad ugu sacbiyeen ayuu yiri been sacabkaas been badanaa war dalka aan u tashano Somaliyey ayuu hadalkiisa sii raaciyey. xaqiiqadii mararka qaarkood markaad aragto sida ay fanaaniintii Somaliyeed ee halkaasi iskugu timid iyo musharaxu iskula jaanqaadayeen waxaadba mooday in aad fadhisid tiyaatarkii Qaranka oo mararka qaarkood marka uu musharaxu hadlayo waxaa cod dhiiragalin ah oo kaftan xambaarsan shacabka dhexdiisa ka tuurayey fanaanada weyn ee Somaliyeed Daleys.
Al muhiim shirkaasi waxuu ahaa shir aan waxbo laga daba dhigan musharaxa oo si Somalinimo iyo reer Hiiraanimo loogu soo dhaweyey halkaasi, si kastaba sanadkani waa sanadkii reer Hiiraan markaad aragto sida ay maalmahan u kacsan yahiin. wax badan ayey muwaadiniin Somaliyeed caleema saareen iyadoo ay waliba degaanada Somaliya qaarkood ay hogaanka dalka 5 ilaa 7 mar isku bed bedeleen halka reer Hiiraan ay hada u muuqdaan kuwo dejin doono wadanka wadadii ay doonaanba ha u soo maraane doorashada soo socota amaba tiradii la doono ha iska soo sharaxdee Somalinimo iyo midnimo kama sokeeyso shaqsi reer Hiiraan inta uu wadankaas hogaamiye ka noqonayo waayo horey ayey xukunka u soo qabteen si sharaf leh ayeyna kaka tageen marka iyaga kedib ma jirin dowlad in doorasho ku guuleysta hadane markii laga guuleystay xilka wareejisay.
La soco wararkeena danbe filo sawiro goor dhaw
· admin on June 18 2011 01:54:36 · 0 Comments · 3699 Reads ·
14,612,736 unique visits